Kuongororwa kweiyo Energy Sistem wachi mutauri 3, inopfuura wachi yemaawa Gadget nhau
Kuongorora Energy Sistem wachi mutauri 3
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Vatauri, Reviews
Nhasi tinouya neongororo ye gadget isinganyanyi kuzivikanwa kupfuura zvakajairwa. Chishongedzo icho isu tese takave nacho, uye zvakare takavenga, wachi yewachi. Energy Sistem inopa chingave shanduko yewachi wachi, iyo wachi mutauri 3. Iyo wachi yekucherechedzera iyo iwe unenge uine zvishoma zvishoma rudo kune iwe paunomuka mangwanani ega ega.
Iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 inosvika , que kumuka haisi nguva yakaipisisa yezuva. Kutenda kune mutauri wayo, uye mwenje wayo, vanogona kuita nzira yedu yekumuka mangwanani ega ega zvakanyanya kufadza uye kutakurika. Iwe unoda kuona zvese izvo izvo zvekushandisa zvinotipa? Zvakanaka ramba uchiverenga
1 Energy Sistem wachi mutauri 3 inomutsa iwe zvakasiyana
2 Dhizaini yeiyo Energy Sistem wachi mutauri 3
3 Chii chinopa iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 inopa?
4 Energy Sistem wachi mutauri 3 technical sheet
5 Pros uye Cons yeiyo Energy Sistem wachi mutauri 3
6 Maonero emupepeti
Energy Sistem wachi mutauri 3 inomutsa iwe zvakasiyana
Kangani nguva yatakambofunga nezve kurovera alarm yedu wachi kumadziro kana pasi, handiti? Kuve nekurara kwedu kukanganiswa mangwanani chinhu chinenge vanhu vese vanosema. Kunyangwe zvinosuwisa kuti zvisungo zvedu zvinotisiyira imwe sarudzo. Energy Sistem uye mutauri wewachi nyowani 3 achaedza kuita kuti nguva iyoyo ive nyore.
Iyo yakasarudzika alarm wachi iyo kusvika makore mashoma apfuura anga ari mune akawanda kesi yakatsiviwa ne smartphone. Yedu gadget yemazuva ese zvakare inokwanisa kutiita kuti timuke mangwanani ega ega, uye kunyange kutipa iyo nguva. Zveizvi mawachi e alarm ndeaya, kuwedzera, pangozi zvakakomba. Uye pazviitiko zvakawanda chinenge chiri chinhu chekushongedza kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Kana iwe uchida kumuka uine zvirinani mamiriro, pano iwe unogona kutenga iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 paAmazon.
Energy Sistem, ine shanduko yewachi wachi, Inopa ichi chinowanikwa mukana wechipiri. Mutauri kune izvo batanidza yedu smartphone kuteerera kumimhanzi yedu kufarira, ne mwenje inoshandura ruvara uye izvozvo inotimutsa nenzira yakapfava Mangwanani oga-oga. Izvi zvinonzwika zvirinani kwazvo kwatiri kupfuura iyo yakashata "nyuchi ... nyuchi !!", handizvo?
Iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 zvakare ane FM redhiyo, pasina kupokana chinowedzera icho chinoita kuti chiwedzere kuwanda. A imwe yesarudzo shoma dzatinogona kuwana mumusika kuteerera redhiyo pasina kukosha kweinternet kubatana. Kutenda kune yako revatema kanyanga isu tichakwanisa kunakidzwa kuburikidza negudzanzwi rayo chirongwa chedu chaunofarira, mutambo uri pabasa kana nhau dzenguva.
Zvakare, kana zvirizvo zvishongedzo zvine chinokwezva, dhizaini yazvino uye kuti tinogona kutora kwese, zvirinani. Kubatana bluetooth, yakavhenganiswa FM redhiyo, mwenje dze LED yemavara, bhatiri remukati kushandisa pasina plugs, uye mutengo wakachipa unogonesa iwe?
Dhizaini yeiyo Energy Sistem wachi mutauri 3
Tinowana mutauri uyo pamusoro pekushandira kutimutsa pamwe aramu yenyu inokodzera yakakura pabasa rako tafura, imba yekutandarira kana kicheni. Mumhanzi wedu unonzwika kwazvo paari nekuda kwake 8 Watts emasimba chero mumba. Y maitiro ake haapesane mune chero nzvimbo. Ruvara rwayo chena uye runopenya nemitsetse yakapfava yakakomberedza maziso ese.
In the pamusoro ndiyo mutauri ane grille chena, inowirirana neyasara muviri we gadget. Imo chaimo muchikamu cheiyo grid inowanikwa inobata sensor iyo yatinogona kuchinja nayo ruvara yechiedza chine kupomba. Kana nekudzvanya kwenguva refu isu tinogona kusarudza akasiyana mwenje modes. Pakati pavo iyo otomatiki color shanduko, kana iyo yekumuka mamiriro, semuenzaniso.
In the pamberi chikamu takawana imwe diki skrini patinogona kuona nguva yakavhenekerwa nguva dzose. Pamwe iyo skrini ichabuda zvimwe zvidiki maererano nehukuru hwegajeti. Kunyangwe uri pachinhambwe chipfupi, senge kubva pamubhedha kuenda patafura yemubhedha, unogona kuona nguva yacho zvakakwana.
Mune rimwe rake lateral takawana iyo Chinyorwa chidhiraivhu chine mabhatani mana, kunze kwaizvozvo Chinja uye bvisa. Navo tinogona dzora kutamba yemimhanzi, seta alarm kana kumisikidza iyo modhi kuti ubatanidze nayo nemudziyo watinosarudza.
Na kumberi kweruwa ndiko kune zviteshi zvekubatanidza. Isu tinowana chiteshi chekuchaja mune iyi kesi ne fomati Micro USB. Uye zvakare mini jack chiteshi 3.5 kubatanidza chimwe chishandiso pasina kushandisa bluetooth. Iyo poindi inofarira iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 ndeyekuti ine bhatiri rayo. Saka tinogona kuishandisa chero kwatinoda pasina kuenda kunotsvaga plug.
Chii chinopa iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 inopa?
Chii chinonyanya kushamisa nezve Energy Sistem wachi mutauri 3 vari akawanda-mavara mwenje mwenje iro rinoverengerwa. Kutenda ku zvirongwa zvakasiyana Tinogona kusarudza iyo kara inonyatsoenderana neyedu yekushongedza. Kana kuti iite ichichinja yega toni, chimwe chinhu chinogadzira inonakidza mamiriro ekuzorora. Iyo zvakare ine inonzi inonzi mamuka modhi. Uchishandisa iyo yekumuka-mamiriro, sokunge kwaibuda zuva, mutauri wenguva 3 ichavhenekera zvinyoro-nyoro kubva kuChiedza kujeka uye kupenya alarm isati yarira.
Tenga yako Energy Sistem wachi mutauri 3 izvozvi paAmazon isingasviki makumi mana euros
Mutauri ine iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 inayo simba re8 watts. Zviri pachena kuti haisi mutauri ane simba kwazvo isu takaedza, asi zvakakwana kuti unakidzwe nemhando yepamusoro yemimhanzi yedu chero mumba. Mheremhere yainopa yakajeka uye zvinonzwika chaizvo kunyangwe nevhoriyamu yakakwidzwa. Kutenda kune yakasanganiswa suede, isu tinogona zvakare kunakidzwa FM Radio, yekuwedzera iyo yatakada kuwana.
Tichitarisa kune yayo wachi wachi inoshanda, iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 inopa mukana wekupurogiramu maaramu maviri akazvimirira. Kutenda kune yako kubatanidza bluetooth uye chiteshi chako chekupinda 3,5mm jack isu tinogona kumuka, kuwedzera kune yechinyakare aramu, nemumhanzi watinonyanya kufarira. Iyo zvakare ine iyo snooze basa, kumisa alarm uye inodzokorora mushure memaminitsi mashanu. Uye yake 1800 naRaama bhatiri Inoshandiswa kuitira kuti tigone kuishandisa chero kupi, asi zvakare kuti tirege kunetseka nezve wachi yema alarm kana paine magetsi anodzima husiku.
Energy Sistem wachi mutauri 3 technical sheet
Muenzaniso wachi mutauri 3
Kubatana wifi - Bluetooth 4.2 uye 3.5 mm jack
Kusvikira kusvika pamamita gumi
redhiyo FM ine antenna yakabatanidzwa
Battery 1800 naRaama
Autonomy 11 maawa
Kuchaja nguva 3 maawa
Weight 537 d
Vipimo 140 X 130 X 130
Mutengo 39.90 €
Tenga chinongedzo Energy Sistem wachi mutauri 3
Pros uye Cons yeiyo Energy Sistem wachi mutauri 3
Chinhu chakanyanya kunaka ndechekuti iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 ine bhatiri rako, chimwe chinhu chinopa chishandiswa zvakati wandei kunze kweye wachi yewachi.
La FM Radio Iine antenna yakabatanidzwa zvakare inonakidza inowedzera iyo inoita kuti mutauri wewachi awane mapoinzi achienzaniswa nedzimwe sarudzo.
La simba mutauri 8 W inoita mimhanzi yedu kana redhiyo kurira kwazvo mune chero kona yeimba.
Simba uye ruzha mhando
Iyo Energy Sistem wachi mutauri 3 isina kugadzirirwa kushandiswa ne Alexa kana chero mumwe mubatsiri wezwi, chimwe chinhu chinotadzisa mashandiro acho.
El Screen size Izvo zvinosetsa, kunyanya tichifunga saizi yechigadzirwa.
Hazvipindirani nevabatsiri vezwi
3.5 nyeredzi chiyero
Energy Sistem wachi mutauri 3
Kudzokorora kwe: Rafa Rodríguez Ballesteros
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Kuongorora Energy Sistem wachi mutauri 3
Dzese nhau kubva kuNetflix neHBO munaKurume 2020
MateBook D15, kutakurika uye dhizaini yekushandisa kwemazuva ese [KUSHURE]